Bit By Bit - Okwu Mmalite - 1.4 Gburugburu nke akwụkwọ a
Uzo abuo n'ime akwukwo bu 1) Ikwado njikeremades na custommades na 2) omume oma.
Egwu abụọ na-agba ọsọ n'ime akwụkwọ a niile, m ga-achọ ịmepụta ha ugbu a ka ị wee hụ ha ka ha na-abịa ugboro ugboro. A pụrụ igosi nke mbụ site na ihe atụ nke na-atụle nnukwu ihe abụọ: Marcel Duchamp na Michelangelo. Duchamp bụ onye a maara nke ọma maka ndị njikere ya, dị ka Isi iyi , ebe ọ na-ewere ihe ndị nkịtị ma weghachite ha dịka nkà. N'aka nke ọzọ, Michelangelo adịghị echegharị. Mgbe ọ chọrọ ịmepụta ihe oyiyi nke Devid, ọ chọghị otu nkume marble nke dị ka Devid: ọ nọrọ afọ atọ na-arụ ọrụ iji mepụta ihe omume ya. David adighi njikere; ọ bụ ihe eji eme ya (nọmba nke 1.2).
Foto nke 1.2: Isi iyi Marcel Duchamp na David site n'aka Michaelangelo. Isi iyi bụ ihe atụ nke njikere, ebe onye na-ese ihe na-ahụ ihe dịrịrịrị na ụwa ma mepụtaghachi ya maka nkà. Devid bụ ihe atụ nke nkà nke e kere eke; ọ bụ ememe. Nchọpụta mmadụ na afọ dijitalụ ga-agụnye ma njikere ma ọ bụ omenala. Foto nke isi iyi site n'aka Alfred Stiglitz, 1917 (Isi mmalite: Nwoke kpuru ìsì , nke 2 / Wikimedia Commons ). Foto nke David site Jörg Bittner Unna, 2008 (Isi: _Galleria dell'Accademia, Florence / Wikimedia Commons ).
Ụdị ụzọ abụọ a-readymades na custommades-na-agbanyeghị n'ụdị oyiri na-ejikarị arụ ọrụ maka nchọpụta mmadụ na afọ dijitalụ. Dịka ị ga-ahụ, ụfọdụ n'ime ihe atụ ndị dị na akwụkwọ a gụnyere ịghaghachi azụpụta nnukwu ihe ọmụma data ndị ụlọ ọrụ na ndị gọọmenti guzobere. N'ihe atụ ndị ọzọ, Otú ọ dị, otu onye nchọpụta malitere otu ajụjụ dị mkpa wee jiri ngwá ọrụ nke afọ dijitalụ mepụta data dị mkpa iji zaa ajụjụ ahụ. Mgbe emechara nke ọma, ụdị abụọ a nwere ike ịdị ike. Ya mere, nchọpụta mmadụ na afọ ole na ole ga-agụnye ma njikere ma ọ bụ omenala; ọ ga-agụnye ma Duchamps na Michelangelos.
Ọ bụrụ na ị na-ejikarị data ejikere, enwere m olileanya na akwụkwọ a ga-egosi gị uru nke data nhazi. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị na-ejikarị ihe eji eme ihe, ana m enwe olileanya na akwụkwọ a ga - egosi gị uru nke data data na njikere. N'ikpeazụ, nke kachasị mkpa, enwere m olileanya na akwụkwọ a ga - egosi gị uru nke ijikọta ụzọ abụọ a. Dịka ọmụmaatụ, Joshua Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya bụ akụkụ Duchamp na akụkụ Michelangelo; ha weghachite ihe ndekọ akuko (a kwadebere) ma ha mepụtara data ha nyocha (nke a na-eme). Ngwakọta nke njikeremades na omenala bụ ụkpụrụ ị ga-ahụ na akwụkwọ a; ọ na-achọ ka e nweta echiche sitere na sayensị mmadụ na sayensị data, ọ na-edugakwa na nyocha kachasị mma.
Isiokwu nke abụọ nke na-agafe n'akwụkwọ a bụ ụkpụrụ omume. Aga m egosi gị otu ndị na-eme nnyocha pụrụ isi jiri ike nke afọ dijitalụ mee nchọpụta na-akpali akpali na dị mkpa. Aga m egosi gị otu ndị na-eme nchọpụta na-eji ohere ndị a eme ihe ga-ebute mkpebi ikpe siri ike. Isi nke 6 ga-adọrọ kpamkpam n'omume ọma, mana m na-eme ka ụkpụrụ omume dị na isi nke ndị ọzọ nakwa n'ihi na, na afọ dijitalụ, ụkpụrụ omume ga-abụ akụkụ dị ukwuu nke nyocha ọchụchọ.
Ọrụ nke Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya bụ ihe atụ ọzọ. Ịnweta akwụkwọ ndekọ akụrụngwa site na 1.5 nde mmadụ na-emepụta ohere dị ebube maka nyocha, ma ọ na-emepụta ohere maka nsogbu. Dịka ọmụmaatụ, Jonathan Mayer na ndị ọrụ ibe (2016) egosila na ọbụna "oku a na-akpọ aha" (ya bụ, data na-enweghị aha na adreesị) nwere ike ijikọta ya na ozi ọha na eze iji chọpụta ndị mmadụ kpọmkwem na data na ihe ọmụma na-adịghị mma gbasara ha, dị ka ụfọdụ ozi ahụ ike. Iji mara nke ọma, Blumenstock na ndị ọrụ ibe ya anwaghị ịchọta ozi gbasara ihe gbasara onye ọ bụla, mana nke a pụtara na ọ siri ike ka ha nweta data oku na-amanye ha ka ha nwee nchekwa dị ukwuu mgbe ha na-eduzi nnyocha ha.
E wezụga nkọwa nke ihe ndekọ oku ahụ, enwere esemokwu dị oke egwu nke na-eme n'ọtụtụ nchọpụta mmadụ na oge dijitalụ. Ndị na-eme nnyocha-mgbe mgbe ha na ụlọ ọrụ na gọọmenti na-arụkọ ọrụ-nwere ikike dị ukwuu karịa ndụ ndị na-eso. Site n'ikike, enwere m ike ime ihe nye ndị na-enweghị nkwenye ma ọ bụ ọbụna ịma. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịhụ ugbu a àgwà nke ọtụtụ nde ndị mmadụ, dị ka m ga-akọwa mgbe e mesịrị, ndị nchọpụta nwekwara ike idebanye nde mmadụ ndebanye n'ọtụtụ nnwale. Ọzọkwa, ihe a nile nwere ike ime n'emeghị nkwenye ma ọ bụ mmata ndị mmadụ. Dika ike nke ndi nyocha na-eto uba, enweghi otutu ihe kariri nke oma banyere otu esi eji ike ahu eme ihe. N'ezie, ndị nchọpụta ga-ekpebi otú ha ga-esi jiri ike ha dabere na iwu, iwu, na iwu na-enweghị isi. Njikọ a nke ike dị ike na nduzi na-enweghị isi pụrụ ịmanye ndị nchọpụta nwere ezi nzube iji nagide mkpebi siri ike.
Ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya n'otú usoro ntanetị na-emepụta ohere ọhụrụ, enwere m olileanya na akwụkwọ a ga - egosi gị na ohere ndị a na - emekwa ka ọ dị ọhụrụ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya n'ihe ize ndụ ndị a, ana m enwe olileanya na akwụkwọ a ga-enyere gị aka ịhụ ohere-ohere ndị nwere ike ịchọ ihe ize ndụ ụfọdụ. N'ikpeazụ, nke kachasị mkpa, enwere m olileanya na akwụkwọ a ga-enyere onye ọ bụla aka iji aka ya dozie ihe ize ndụ na ohere ndị nchọpụta mmadụ na-eme na dijitalụ. Site na mmụba na ike, ọ ghaghị ịbawanye ibu ọrụ.